Forum Malagasy :: Fandefasana sary
Forum Malagasy Index du Forum FORUM - REGIONS Antsirabe Fandefasana sary
Sujet du message: Fandefasana sary
Efa afaka mandefa sary mivantana eto isika izao ka tonga dia miseo eto @ forum ilay sary izay alefantsika.
Misy bouton ao ambany eo rehefa manoratra message hoe envoyer une image. Dia io no tsindrina dia eo @ ilay bokotra hoe parcourir iny tsindrina hijerenao izay toerana misy ilay sary ao anaty machine ampiasainao.Dia envoyer.Dia misy lien mipoitra eo ambony eo ravieo dia iny no ataovy copier coller eo @ message nao dia mipoitra ny sary rehfa envoyer ilay message.
Misy sary andrana ity ataoko eto ambany eto. Raha misy fanotaniana na tsy mazava dia afaka manotany eto hianareo.
Sujet du message: Andrana sary
Fanandramana mandefa sary eto